Dood uu caawa ka qayb gali rabay Kheyre oo xaalado soo kordhay loo baajiyay – WIDHWIDH ONLINE
Dood uu caawa ka qayb gali rabay Kheyre oo xaalado soo kordhay loo baajiyay
Published: May 14, 20198:38 pm
axaa goordhow la baajiyay barnaamij Dood ah uu ka qayb geli lahaa Raysal Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyrre, taas oo ka dhaci laheyd Hotel ku yaala magaalada Muqdisho oo lagu magaaco Royal Place.
Barnaamijkaan ayaa galabta ka dhaci lahaa Hotelka Royal Place waxa uuna toos uga bixi lahaa ilaa 6 TV, iyadoo ay ka qayb geli lahaayeen tobaneeyo dhalinyaro ah oo ay soo diyaariyeen Koox ka tirsan Xafiiska Raysal Wasaaraha Soomaaliya.
Magaca barnaamijka ayaa ahaa Dood Furan, waxaana doorka lagu saari lahaa sida ay dhalinyarada uga qayb qaadan karaan horumarinta dalka iyo dhismaha dowladnimada. Sidoo kale doorka dhalinyarada ee Nabadda iyo Xasiloonida ayaa looga hadli lahaa Dooda baaqatay.
Sababta ay dooda u baaqatay ayaa lagu sheegay xaaladda magaalada Muqdisho oo maanta ilaa caawa aad u qasan kadib markii ay banaanbaxyo ay dalka ka dhaceen iyo Qaraxii saakay ka dhacay degmada Warta-Nabadda ee Gobalka Banaadir.
Weerar Ismiidaamin ah oo goordhaw lagu qaaday xero ay degan yihiin Ciidamada Itoobiya
Published: February 2, 20198:57 am
Ciidamada Danab Oo Si Buuxda Ula Wareegay Gacan ku heynta Deegaanaka Gamboole Oo ka tirsan G/shabeelaha dhexe
Published: March 11, 201812:09 am